Ụlọikpe Mkpegharị Mkpegharị US kwụsịrị iwu ịgba ọgwụ mgbochi Federal ugbu a
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Ụlọikpe Mkpegharị Mkpegharị US kwụsịrị iwu ịgba ọgwụ mgbochi Federal ugbu a
Courtlọ ikpe mkpegharị ikpe nke United States maka sekit nke ise taa nyere ọnụnọ nwa oge, na-akwụsị ikike ịgba ọgwụ mgbochi gọọmentị nke Biden maka ndị were ihe karịrị ndị ọrụ 100. First Liberty Institute rịọrọ sekit nke ise n'aha Daystar Television Network na American Family Association ka ha nyochaa iwu a.
Kelly Shackelford, Onye isi ala, onye isi ala na onye ndụmọdụ nke mbụ kwuru, "Anyị anaghị ebi n'ọchịchị aka ike ebe Onye isi ala nwere ike ịnye iwu wee weghara nnukwu ụlọ ọrụ niile dị na mba anyị na ndụ ihe karịrị nde ndị America 84." Ụlọ ọrụ nnwere onwe. "Iwu ahụ emegideghị iwu na-emegidekwa iwu iwu. Obi dị anyị ụtọ na sekit nke ise akwụsịla ime ya.”
Ụlọ ikpe ahụ kwuru, "N'ihi na arịrịọ ndị a na-eme ka a kwenye na e nwere nnukwu iwu iwu na okwu iwu na iwu iwu, iwu a na-echere ka ụlọ ikpe a ga-eme ọzọ."
Daystar Television Network bụ netwọk mba ụwa, dabere na okwukwe “raraara onwe ya nye ịgbasa Oziọma ahụ awa 24 kwa ụbọchị, ụbọchị asaa n'izu” yana Association ezinụlọ America bụ otu n'ime ọgbakọ ezinaụlọ kacha ukwuu na mba ahụ. Òtù ọ bụla nwere ihe karịrị ndị ọrụ 100, na-eme ka ha nọrọ n'okpuru iwu mgbochi ọhụrụ.
N’ọnwa Septemba, Onye isi ala Biden gwara ndị ọrụ nchekwa na ahụike ahụike (“OSHA”) ka ha wepụta “ụkpụrụ mberede nwa oge” (ETS) nke gọọmentị etiti chọrọ azụmahịa niile nkeonwe nwere ndị ọrụ 100 ma ọ bụ karịa iji hụ na agbanyere onye ọrụ ọ bụla ọgwụ mgbochi megide COVID-19. nje ma ọ bụ na-eweta nsonaazụ ule na-adịghị mma kwa izu ma ọ bụ nwee ntaramahụhụ. Dị ka iwu gọọmenti etiti si kwuo, enwere ike ịnye ETS naanị mgbe ime nke a "dị mkpa" iji chebe ndị ọrụ pụọ ​​na "ihe egwu dị egwu" site na ikpughe na "ihe ma ọ bụ ndị ọrụ kpebiri na ha ga-egbu egbu ma ọ bụ na-emerụ ahụ ma ọ bụ site na ihe ize ndụ ọhụrụ." Otu ETS bụ nwa oge ma na-agwụ mgbe ọnwa isii gachara, mgbe nke ahụ gasịrị, a chọrọ ka ụlọ ọrụ ahụ nye iwu na-adịgide adịgide nke kwekọrọ na usoro nhazi ogologo oge.